Isicelo Sesampula Yohlu Lwama-imeyili kusuka Kwidatha Yokugcina Imeyili
Ikhaya » Isampula Yedatha
Usithumela imininingwane ngefibhalaza ifomu elingezansi. Futhi sicela ukhumbule ukuthi sikuthumela kuphela iheda yedatha ukubona ukuthi yiluphi ulwazi olufaka database yethu. Ngeke sikuthumele idatha yangempela njengesampula ngoba yephula Imithetho ye-GDPR. Uzothola idatha yedemo kuphela ukuze ubone inhloko yedatha. Le datha hhayi yokuthumela noma iyiphi i-imeyili yokuhlola noma izingcingo noma ama-sms. Sicela ukhumbule lokho.
Igama lakho eliphelele
I-ID yakho ye-Skype
Inombolo yakho Yefoni ye-WhatsApp
Igama Ledatha Egciniwe
Hire Email Uhlu Yakha Isazi Isazi
Umphathi Weqembu lethu
Ezemfundo: IBachelor of Business Study
Umphathi Wethimba Leqembu Lokuhola (Idathabheyili Yokugcina Yamaphepha)
UMdu: USajahan Ali ungumphathi weqembu lethu le-lead. Unesipiliyoni seminyaka ye-6 somsebenzi we-leadizukulwane. Ungumuntu osebenzayo, othembekile, osebenza kanzima, onolwazi ngesizukulwane sokuhola. Uma udinga ukwakha noma yimuphi umkhondo oqondisiwe ungaqasha lo muntu. lo muntu uzokwakha uhlu lwakho lwe-imeyili oqondiswe kulo. Ngaphansi kweSajahan Alid babe ne-15 enolwazi lokuhola isizukulwane sokuhola. Ungumphathi weqembu. Ngakho-ke uma udinga ukwakha ukuhola ungaqasha leli qembu. Bazokunikeza i-imeyili enembile futhi esebenzayo futhi yangempela ye-imeyili eyenzelwe wena.
Qasha Sajahan Alid
5 amahora $ 125
HIire Sajahan Alid 5 amahora wokwakha okuholayo
10 amahora $ 250
Hire Sajahan Alid 10 amahora wehora asebenzela ukwakha i-lead
20 amahora $ 500
Hire Sajahan Alid 20 amahora amahora asebenzela ukwakha umkhondo okuqondiswe kuwo.
Igama: Md: Mizanur Rahman
Isihloko: Imenenja yokwakha uhlu lwe-imeyili
Okuhlangenwe nakho: Ukuphathwa kwethimba, ukuphathwa kwephrojekthi, uhlu lwe-imeyili, uhlu lwefoni, ukwakha uhlu lwe-imeyili, ukuhola okuholayo, ukuhola kokuthengisa, ukumaketha i-imeyili, umphathi wezokumaketha we-imeyili, umxhumanisi wokuthengisa we-imeyili
Imenenja Yethimba Le-imeyili Yokwakha Abakwa-imeyili (Idathabheyili Yokugcina Yamaphepha)
Md: Mizanur Rahman uhlu lwethu lwe-imeyili yenkampani yokwakha iqembu. Unesipiliyoni seminyaka ye-6 yomsebenzi wohlu lwe-imeyili. Ungumuntu osebenzayo, othembekile, osebenza kanzima, onolwazi lokwakha uhlu lwe-imeyili oluhlanganisiwe. Uma udinga ukwakha noma yiluphi uhlu lwe-imeyili oluhlosiwe ungaqasha lo muntu. lo muntu uzokwakha uhlu lwakho lwe-imeyili oqondiswe kulo. Ngaphansi kweMizanur Rahman abe no-10 onolwazi lokuhola isizukulwane sokuhola. Ungumphathi weqembu. Ngakho-ke uma udinga ukwakha uhlu lwe-imeyili ungaqasha leli thimba. Bazokunikeza umkhondo we-imeyili onembile futhi osebenzayo futhi ongokoqobo.
4 amahora $ 100
Amahora we-HIire mizanur rahman 4 wokwakha uhlu lwakho lwe-imeyili okuqondisiwe noma umkhondo wokuthengisa.
Amahora we-Hire Mizanur Rahman 10 usebenzela ukwakha uhlu lwe-imeyili
Hire mizanur rahman 20 amahora amahora asebenzela ukwakha uhlu oluqondisiwe.